Computer Technical Notes & Sharing Softwares: July 2010
The Most Popular Virus In Myanmar Family
Microsoft Publisher 2010 Product Guide Final
မကွေးအက်ဖ်စီ ဟု အမည်ထွင်သော ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်
နေ့က ရရှိသော သတင်းများအရ.. မြန်မာပြည်၏ အစိုးရဌာနများနှင့် ကုန်မ္မဏီ ကွန်ပျူတာများတွင် မကွေးအက်ဖ်စီ ဟု အမည်ထွင်သော ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များ ပျံ့နှံလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်၏ တိုက်ခိုက်မှုပမာဏကိုမှု အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပေ။ တိုက်ခိုက်ခံရသူများ၏ ပြောစကားများအရ ကွန်ပျူတာအတွင်းဖိုင်များအား ဖျက်ပစ်ကြောင်းနှင့် ဝင်းဒိုးစ် ၏ desktopရှိ start menuနေရာတွင် မကွေးအက်ဖ်စီ စာတမ်းသာ တွေ့ရတော့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
irusအတိုက်ခိုက်ခံရတာ အများစုဟာ .exeဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူဖွင့်မိလို့ဖြစ်တာအများဆုံးပါ။ ဗိုင်းယပ်နံမည်က mgy.exe ပါ။
mgy.exe Virus တိုက်ခိုက်ခံရသော ကွန်ပျူတာသည် ..
၁) ကွန်ပျူတာသည် နှေးကွေးသွားခြင်း။
၂) Memory Stick များတွင်းမှ Folder များပျောက်သွားကာ ထိုပျောက်သွားသော Folder များ၏ အမည်များဖြင့် .exe File များအစားထိုးဝင်ရောက်နေခြင်း။
၃) Folder Option၊ Taskmanager ပျောက်သွားခြင်း။
၄) cmd.exe ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်းပြန်ပိတ်သွားခြင်း။
၄) .vbs script များ Run ၍မရခြင်း။
၅) Desktop ၏ ညာဘက်အောက်ထောင့် ( အချိန်ဖော်ပြသောနေရာ ) တွင် အထက်ပါ ဖော်ပြထားသော Magway Fc ပုံ မကြာခဏ ပေါ်လာခြင်း
mgy.exe Virus တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရပါက ..
၁) ကွန်ပျူတာတွင် ရှိသော AntiVirus ကို ခေတ္တ ပိတ်လိုက်ပါ။
၂) Virus ကိုဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် System ကို Restart ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် အတွက် လုပ်လက်စအလုပ်များရှိပါက Save ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃) Virus ဝင်ရောက်ခြင်းခံထားရသော Memory Stick များကို ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ဆင်ထားပါ။
၄) mgyVirusRemoval.exe ကို Runလိုက်ပါ။
၅) System Restart ဖြစ်၍ ပြန်လည်တက်လာသည့် အချိန်အတွင် mgy.exe Virus သည် သင့်ကွန်ပျူတာတွင်းနှင့် Memory Stick များတွင်းမှ ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သွားသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
၆) Nod32 AntiVirus အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Nod32 ၏နေရာကို Virus မှ နေရာဝင်ရောက်ယူသွားသဖြင့် Nod32 ကိုပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
virus file များရှာရန် command တစ်ကြောင်းသာအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Made in Myanmar virus တွေပေါ့။taskmanager , folder options , registry ပျောက်နေရင်တော့ virus ၀င်တာသေချာပါပြီ။start>run>cmd ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။command prompt ထဲမှာ cd\_ လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။command prompt မှာ c:\_ လို့ပေါ်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုရိုက်ရမှာက dir/ah *.exe /s/p/b လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။virus ရဲ့ source file များပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ Loikaw , Funny , chrome , mgy.exe တို့ကို စမ်းပြီးပါပြီ။virus file အကုန်လုံးတွေ့ပါတယ်။ဒီ virus file တွေရဲ့ process ကို kill ပြီးမှသတ်လို့ရပါတယ်။အဲဒီအတွက် process explorer software နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။download လုပ်လိုက်ပါဦး။command prompt မှာပေါ်တဲ့ virus file name က process explorer မှာပေါ်ရင် process ကို kill ပြီးvirus ကိုသတ်ပါ။ဒီ command လေးရှိတော့ virus file ကိုအလွယ်တကူရှာပြီးသတ်လို့ရတာပေါ့။အဆင်ပြေပါစေဗျာ
ile တွေ ဖျက်တာကတော့ del filename /s/f/a ပါ။eg del chrome.exe /s/f/a ပါ။ s ဆိုသည်မှာ file ရှိတဲ့ folder ကော် သူ့ရဲ့ sub-folder တွေပါဖျက်တာပါ။fကတော့ force deleting ပါ။aကတော့ attrib လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုဖျက်တာပါ။aထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် hidden , read only ,system တို့ကိုဖျက်လို့ရပါတယ်။attrib chrome.exe -s -h -r ဆိုပြီးလုပ်စရာမလိုပါ။တစ်ခါတည်းဖြတ်ပစ်တာပါ။
ir/ah *.exe /s/p/b စစ်လို့ပေါ်လာတိုင့် virus လို့ပြောလို့မရပါ။ virus name နဲ့ process explorer မှာပြတဲ့ name နဲ့တိုက်ကြည့်လို့တွေ့မှသာ virus ပါ။ eg. mgy virus ၀င်နေလို့ရှာမယ်ဆိုပါစို့။ cmd မှာ dir/ah *.exe /s/p/b လို့ရိုက်ပါ။ mgy.exe ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ process explorer ကိုဖွင့်ပါ။ mgy.exe အလုပ်လုပ်နေတာကိုပြနေပါလိမ့်မယ်။ဒီနည်းအတိုင်းတခြား virus များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ dir/ah *.exe /s/p/bလို့စစ်လို့ တွေ့တဲ့ file များကိုအကုန်ဖျက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုပိုစိတ်ချရတာပေါ့။တချို့ virus ကိုက်လို့ command prompt ခေါ်လို့မရရင် windows ကို restart လုပ်ပါ။ post လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ F8 key ကိုဆက်တိုက်နိုပ်ထားပါ။ Safe Mode options ပေါ်လာရင် Safe Mode with command prompt ကိုရွေးပါ။ command prompt ပေါ်လာရင် dir/ah *.exe /s/p/b လို့ရိုက်ပါ။တွေ့သမျှ file ကိုဖျက်ပါ။သူ့ရဲ့ process ကို kill စရာမလိုတော့ပါဘူး။တစ်ခါတည်း delete လုပ်ပါ။ နောက်ပြီး command prompt မှာ msconfig လို့ရိုက်ပါ။ startup Tab ကိုသွားပြီး ခုနက command prompt မှာ ပေါ်တဲ့ file များကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။ဒါဆိုရင် virus ပါတစ်ခါတည်းသတ်နည်းပါ။ s/p/b ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သာမက ကျနော်တကြောင်းလုံးကိုရှင်ပြပါမယ်။
ir/ah *.exe /s/p/b
ir/ah = dir က windows ရဲ့ File & Folder တွေကိုခေါ်ကြည့်တဲ့နေရမှာသုံးတာပါ။ ah ဆိုတာကတော့ attrib လုပ်ထားတဲ့ file တွေပါ။
attrib file ဆိုတာ Read only , Hidden , System file တွေကိုပြောတာပါ။ eg. boot.ini // virus file တွေက boot.in file လိုပဲ ttrib file တွေပါ။
.exe = *.exe ကတော့အရှေ့က * က file name ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကိုပြောတာပါ။ဒါပေမဲ့ exe file ပဲဖြစ်ရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ exe ပါ
/s = /s ကတော့ သူ့ရဲ့ ဆင့်ပွား Folder တွေထဲက file တွေကိုကြည့်တာပါ။ eg. c: ရဲ့ ဆင့်ပွား Folder က file ကြည့်ရင် windows system32\_cmd.exe ပါ။cmd.exe က c: ရဲ့ ဆင့်ပွား folder က file ပါ။
p = /p ကတော့ virus file တွေကိုတမျက်နှာဆီပြတာပါ။
b = /b ကတော့ file တွေ ရဲ့ information တွေကိုဖျောက်ပြီးကြည့်တာပါ။
MGY Virus ကို အလွယ်သတ်နည်း
အရင်ဆုံး MGY Virus ၀င်ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာဝင်လဲဆိုတာကိုတော့ အသိတော့ အသိသာကြီးပါ။ ထုံးစံအတိုင်း Task Manager, Folder Option ပိတ်သွားတယ်။ Start Menu က Start နေရာမှာ MagwayFC ဆိုပြီး ပြောင်းသွားတယ်။ Start Menu ထဲက My Computer Link တွေ Control Panel Link တွေရဲ့ icon က မကွေး FC ရဲ့ Logo တွေ ပြောင်းသွားပါတယ်။ txt, bat, com ဖိုင်တွေရဲ့ icon တွေလည်း မကွေး FC ရဲ့ Logo တွေ ပြောင်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ Welcome to Magway FC ဆိုပြီး အနီရောင်နောက်ခံနဲ့ box လေးက Taskbar ရဲ့ ညာဘက်မှာ အမြဲတမ်း ပေါ်လာပါတယ်။ Folder တွေ တစ်ခုမှ ဖွင့်မရတော့ဘူး။ ဘယ် Software မှ တင်လို့ မရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး Start>All Programs ထဲက Program တွေလည်း တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး။ Program တွေကို ဖျက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ .lnk တွေကို hidden လုပ်လိုက်တာပါ။
အဲဒီလိုတွေ အရမ်းများတာမို့ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ပြီးရင် Windows ပြန်တင်လိုက်တာက အမြန်ဆုံးနည်းပါ။ တစ်ခု ရှိတာက မကွေးကို မသတ်ပဲနဲ့ Windows ပြန်တင်လည်း ခဏပါပဲ။ မကွေးက ပြန်ဝင်မှာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူက D: တွေ E: တွေထဲမှာပါ ၀င်ကုန်တာကိုး။ ဒါကြောင့် သတ်ပြီးမှ တင်ပါ။
ဒါပေမဲ့ လိုင်စင် Windows ကြီးဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ရေးထားသလို အသေးစိတ်သတ်ပြီး ပြင်ပေးမှ ရပါမယ်။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လိုင်စင် Windows ကြီး ဖျက်ပြီး ခိုးကူး Windows ကြီး ပြန်တင်ပေးရင်တော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ဒါကြောင့် လိုင်စင် Windows ဆိုရင်တော့ ထစ်ခနဲရှိ Windows ပြန်တင်ရတာမျိုးတော့ လုပ်မရတော့ဘူးပေါ့။ မသကာ Recovery လုပ်တာက အလွန်ဆုံးပဲ။
သတ်နည်းလေး ပြောပါဦးမယ်။ လိုအပ်တာတွေက
(၁) Hiren Boot CD
(၃) Tuneup Utilites
(၄) RRT, HijackThis
မကွေးဝင်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ကွန်ပျူတာကို မသုံးပါနဲ့တော့။ ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Hiren နဲ့ Boot တက်ပါ။ အဲဒီထဲက Mini Windows XP နဲ့ boot တက်ပါ။ Mini Windows XP တက်လာရင် C: ထဲက mgy.exe, autorun.inf တွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ရှိပြီးသား Folder တွေနဲ့ နာမည်တူ .exe ဖိုင်တွေ၊ .lnk.exe ဖိုင်တွေ အကုန်ဖျက်ပါ။ C:\_Windows ထဲက mgy.exe ကိုလည်း ဖျက်ပါ။ System32 ထဲက 27 နဲ့ စတဲ့ Folder နဲ့ mgy.exe ကိုလည်း ဖျက်ပစ်ပါ။ C: ထဲက System Volume Information နဲ့ Recycler, Recycled တွေကိုလည်း ဖျက်ပါ။ တခြား D: တွေ E: တွေထဲက mgy.exe ကို ရှာဖျက်ပါ။ မကွေးက ပွားလိုက်တဲ့ .exe ဖိုင်တွေဟာ 15.6 MB တွေ ချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကွေးနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြီးသွားရင် HDD ထဲက Windows ပြန်တက်လိုက်ပါ။ RRT နဲ့ ပိတ်ထားတာတွေကို ပြန်ဖွင့်မယ်။ HijactThis နဲ့ Autorun တွေ ဖြုတ်မယ်။ Software တွေ တင်မရ အောင် လုပ်ထားတာကို Registry ထဲမှာ DisableMSI key ရှာပြီး Value ကို0ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
Icon တွေကို Windows Default အတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေဖို့အတွက် Tune up သုံးရင် ရပါတယ်။ မကွေးက shell32.dll အစား sxell32.dll အစားထိုးလိုက်တာမို့ အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာပါ။
နောက်ပြီး မကွေးဖျောက်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေက Super Hidden တွေဖို့ Folder Options က Show Hidden နဲ့ဆို မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ XYplorer နဲ့တော့ မြင်ရမယ်။ ပြီးရင် XY နဲ့ attribute တွေဖြုတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်။ Start Menu ထဲက ပျောက်နေတာတွေကိုလည်း XY နဲ့ပဲ ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်။
Start Menu မှာ MagwayFC ဖြစ်နေတာကိုတော့ Resource hacker ကို အသုံးပြုပြီး http://www.theeldergeek.com/change_text_on_xp_start_button.htm မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း Start ဆိုပြီး ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် မကွေးလည်း သေသွားပါပြီ။ Windows လည်း ပြန်ကောင်းသွားပါပြီ။ Windows ကို ပိုသန့်သွားအောင် Command Prompt ကိုဖွင့်ပြီး sfc /scannow ပေးလိုက်ပါ။
MgyVirusCleaner မှ မရှင်းလင်းနိုင်သည်မှာ virus မရှိတော့သော်လည်း software
များကို install လုပ်၍မရတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ OK ၏ MgyVirusCleaner သုံးပြီး၍
Virus မရှိတော့လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
Start > Control Panel > Administrative Tools ကိုအဆင့်ဆင့်ဖွင့်ပါ။
Administrative Tools ထဲမှ Local Security Policy ကို ဖွင့်ပါ။
Local Security Policy ထဲတွင် Software Restriction Policies ကို Right-click နှိပ်၍ “New Software Rectriction Policies” ကိုရွေးနှိပ်ပါ။
Software Restriction Policies ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လျှင် ညာဘက်ခြမ်းတွင် Enforcement ကိုတွေ့ရမည်။
၎င်း Enforcement ကို Double-click နှိပ်ပါ။ “All users except localadministrators" ကိုရွေးနှိပ်ပြီး OK နှိပ်ပါ။ Local Security Policy ကိုပိတ်ပါ။ Control Panel ရှိနေသေးလျှင် ပိတ်ပါ။
Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။ (Windows XP အတွက် Start > Run တွင် regedit ဟုရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ Windows Vista or7အတွက် Start နှိပ်ပြီးသည်နှင့် regedit ဟုရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။)
ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Policies\_Microsoft\_Windows\_Installer အထိ အဆင့်ဆင့် Double-click နှိပ်ပြီး ဖွင့်သွားပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှ DisableMSI ကို Double-click နှိပ်ဖွင့်ပြီး 1 ဖြစ်နေသည်ကို0ဟုပြင်လိုက်ပါ။ OK နှိပ်ပါ။ Registry Editor ကိုပိတ်ပြီး စက်ကို Restart ပြန်လုပ်လိုက်လျှင် Software များ Install ပြန်လုပ်၍ရသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
Posted by SLIP at 4:47 AM 1 comments
Microsoft Publisher 2010 Product Guide_Final
Posted by SLIP at 1:45 AM0comments
Labels: Microsoft Publisher 2010